Imisho eyaziwa - umsuka wayo kanye nencazelo
Amazwi | | Ukuhlelwa kolimi
"Hlala njengezinkukhu", "ume phezu kwebhubhisi", "yenza usuku" - yiyo yonke imishwana esisebenzisayo ekuphileni kwansuku zonke, ngaphandle kokwazi ngempela ukuthi ivelaphi. Nakuba sisazi ukuthi sisho ukuthini ngalokhu futhi wonke umuntu uyaqonda ukuthi kusho ukuthini, kodwa uma uhlola ngokucacile indalo yemisho, ngokuvamile ihlekisa kakhulu noma ayisekho umqondo namuhla.
Amazwi - incazelo nokuvela kwawo
Amazwi amaningi angayenza ngokusesikhathini, ukuze abanikeze isithombe esicacile futhi. Lezi zinkulumo zanamuhla kuphela azivumi futhi sihlale sibuyela kulabo bokuqala. Manje yisikhathi sokubheka ngokuseduze imvelaphi.
Imisho eyaziwayo imane ichazwe
Amadayimenti ayakhiwe ngezakhi zomzimba ezingenakushintshaniswa izingxenye zalo ngoba kungenjalo isithombe esiphezulu asisekho. Ukusuka "ukulala okuluhlaza okwesibhakabhakeni" akukwazi ukuthi "Okubomvu kusuka esibhakabhakeni ukulala", ngoba akekho owaziyo lokhu futhi akwenzi lutho.
Amazwi yizinkulumo ezifanekayo ezaziwa kahle futhi zisekelwe ngolimi. Lokhu kuyatholakala nangezinye izilimi. Ngenkathi 'imvula' nathi, imvula eNgilandi "Amakati nezinja" - okungukuthi amakati nezinja. Kuleli zwe, ngeke sikuqonde lokhu, eNgilandi, ngakolunye uhlangothi, umuntu akaqondi iwele.
Siqoqe imishwana ejwayelekile kakhulu futhi sizizwa "ezinyoshweni". Lapha ungakwazi ngisho uzibonele lapho khona imishwana ejwayelekile kakhulu isizwe saso.
"Imfundo enhle yesikole i-alpha ne-omega yokuqala umsebenzi," kusho ugogo kaFrederike, ebheka ngokukhathazeka ngamabanga omzukulu wakhe. UFrederike uyazi ukuthi akazange ahlaziye udumo lwakhe embikweni wonyaka odlule futhi izimpendulo zezimvu zizoba ngcono esikhathini esizayo izinyanga eziyisithupha.
Inkulumo ethi "i-alpha ne-omega" isho ukuthini?
Khona-ke ucela ugogo wakhe ukuthi kungani imfundo yesikole ingaba i-alpha ne-omega yokuqala umsebenzi. Ugogo uyaphendula: "Lokhu kusho ukuqala nokuphela. Uma unakekelwa esikoleni kusukela ekuqaleni, uzophela ngezinga elihle futhi ungakwazi ukufunda noma yini oyifunayo. "
Ngemuva kwemini, uFrederike uya ekhaya ukuze abonise abazali bakhe amamaki. Ulokhu ecabanga ukuthi kungani umkhulu ebeka i-A yokuqala kodwa u-O wokuphela. Mhlawumbe umkhulu wakho akakwazi ukufunda nokubhala kahle?
Umama kaFrederike kufanele ahleke lesi sitatimende sendodakazi yakhe futhi uyachaza:
"Izinhlamvu zesiGreki zinombhalo we-A for Alpha njengencwadi yokuqala ne-O ye-Omega njengencwadi yokugcina. Le nkulumo ivela ekuhunyushweni kweBhayibheli nguMartin Luther. Kulo, uNkulunkulu uthi, "Ngingu-Alfa no-Omega, ukuqala nokuphela ..." La mazwi avela kusAmbulo sikaJohane uMama uyazi ukuthi: "Lokho kusho; ngubani onokuqala nokuphela kwento, umbono wenkosi yonke. Ngakho, amandla olwazi aboniswa. "
UFrederike umxhwele kakhulu futhi unquma ukuthi esikhathini esizayo ufuna ukugcina yonke into futhi athuthukise amamaki esikoleni.
U-Anke uyadabukisa. Ufuna ukuya emabhayisikobho nomngani wakhe omkhulu namuhla, kodwa ukhansele ngomzuzwana wokugcina. UStefan, umfowabo omkhulu ka-Anke, uzama ukumduduza. "Khona-ke uya kuma-movie kusasa, akusiyo kubi."
Inkulumo ethi "iphuzu eliyinhloko" lisho ukuthini?
"Kusasa akusilo usuku lwe-cinema futhi ifilimu ibiza ama-euro amabili ngaphezulu. Iphuzu liwukuthi, anginayo imali eningi ephaketheni. "
Akuyona isimo esihle, kodwa kufanele uhleke esitatimendeni esitatimendeni.
Iyini iphuzu eliyinhloko? Ingabe izimpawu zokubhala zifinyelela phezulu futhi phansi ngenjabulo? Futhi uma kunjalo, lokho kusho ukuthini nesitatimende?
Inkulumo ibonisa ukuphuthuma noma ukubaluleka. Ivela ku-Aristotle, owaqaphela ukuthi kwi-yolk yeqanda leqanda lezinkukhu iphashazi elincane liyehla futhi liye phansi lapho inkukhu iphetha.
Leli phuzu elincane yinhliziyo futhi ngaleyo ndlela isitho esibaluleke kakhulu senkukhu ekhulayo. Futhi-ke isisho esitatimendeni sikhombisa ukuthi yini ebaluleke kakhulu lapha.
Isho ukuthi i-180
Amademoni - Ngizofuna ukunxantathu
Amagama - Izakhiwo zivimbela
Izilimi zaseJalimane zihlekisayo ngesiNgisi | amahlaya